FAMPAHALALANA SY SARY MOMBA NY FIOMPIANA ALIKA RANO PORTIOGEY - ALIKA
Fampahalalana sy sary momba ny fiompiana alika rano Portiogey
Parker ilay alika rano Portiogey amin'ny 10 taona— 'Tian'i Parker mihazakazaka sy manenjika kitrila ao an-tokotaninay. Mpinamana be zotom-po izy ary te hiaraka aminay foana. Tiany ny mitaingina ny fiara ary raha tsy mihodina eo am-baravarankely ianao dia hahita fomba hanodinana azy io. Niaraka tamin'ny vadiko izy, tamin'izy lasa nihazakazaka. '
Ny alika rano portiogey dia alika antonony sy hozatra. Mahitsy sy mahitsy ny topline. Ny loha malalaka sy domed dia somary lava kokoa avy eo ny vava. Ny fihenam-bidy dia misy fijanonana voafaritra tsara. Malalaka ny orona mainty. Mihaona amin'ny hety na manaikitra ny nify. Maizina ny masony antonony sy boribory. Ny sofina miendrika fo dia napetraka avo sy mihantona. Ny rambo dia tsy voafatotra hanampy amin'ny filomanosana, matevina kokoa amin'ny fotony ary mihidy. Esorina indraindray ny demclaws. Mahitsy ny tongotra. Ny tongotra dia ao anaty tranokala izay manampy ny alika milomano. Ny palitao misy sosona tokana dia matevina ary na somary olioly na miloloha volo. Ny loko palitao dia misy loko mainty, fotsy, volontsôkôlà samihafa, loko fotsy misy teboka mainty, mainty na volontany misy marika fotsy, amboadia volafotsy ary volondavenona.
Ny alika rano portiogey dia alika tsy mivadika, velona, ​​tia rano. Animated, mampihomehy, be fanahy ary mahafinaritra ny miaraka, matetika dia mampihomehy ny olona izany. Ity karazana ity dia be fitiavana amin'ny fianakaviany. Manana tanjaka lehibe izy ireo, ary ho tony ny fanatanjahan-tena ampy. Izy ireo dia tsara amin'ny ankizy ary matetika miaraka amin'ny alika sy biby hafa tsy misy olana. Mila mifankahalala amin'ny saka izy ireo mba tsy hiteraka olana koa ny orinasan'izy ireo. Izy ireo dia tsara toetra sy mahafinaritra. Be herim-po, mahafantatra tsara, marani-tsaina ary mora zatra miasa ary mailaka mianatra sy mahatakatra ny torolalana. Tsy sarotra ny fampiofanana ireo alika ireo raha azonao ny fomba mifampiresaka tsara amin'ny biby an-tenda . Tena mora tohina amin'ny feon'ny feony izy ireo ary tokony hanana ny tompony milamina, fa asehoy fahefana tsy miovaova . Tadidio fa ity alika marani-tsaina ity dia hanana fahalalahana raha mahatsapa fa matanjaka kokoa noho ny tompony izy. Hamarino tsara fa tsy miovaova ianao, mafy orina ary matoky ny fomba itondranao ny alika. Ity karazana ity dia mety hieritreritra ny tompony! Vonona sy maniry ny hampifaly azy ity, alika mahatoky sy mpankato. Manao mpiambina tsara izy ireo. Manana fofona faran'izay tsara izy ireo. Mety amin'ny fisedrana fahaiza-manao mivaingana sy fanatanjahan-tena alika maro hafa. Malaza ratsy ny alika kely alika amin'ny rano alika Portiogey chewers . Aza hadino ny manome azy ireo zavatra avelany hitsako. Ny haavon'ny Dominance dia miovaova na dia ao anaty fako iray ihany aza. Ny haavon'ny fanaovana haingon-trano sy anaty dia samy hafa be amin'ny tompona tsirairay ary ny fahafahany mandanjalanja ny filan'ilay alika. Alao antoka fa mafy orina ianao, tsy miovaova ary matoky tena ity alika ity mpitarika fonosana , manome fanazaran-tena ara-tsaina sy ara-batana isan'andro . Raha hitanao fa mihomehy anao ny alikao mba hifandraisana, dia mila mihodina ilay alika ianao ary mijery ny masonao fahaiza-mitarika . Ny alika iray izay mivazavaza aminao amin'ny fomba toy izany dia mampiseho famantarana ny olana manjaka. Aza avela alika mitsambikina amin'ny olombelona .
Haavony: Lehilahy 20 - 22 santimetatra (50 - 57 cm) Vavy 17 - 20 santimetatra (43 - 52 cm)
Milanja: Lehilahy 42 - 55 pounds (19 - 25 kg) Vehivavy 35 - 49 pounds (16 - 22 kg)
Ny tsipika sasany dia mora voan'ny hip dysplasia sy PRA. Mora amin'ny GM-1 Storage Disease, aretin-kozatra mahafaty. Ireo alika ampiasaina amin'ny fiompiana dia tokony hosedraina. Miseho izany rehefa eo amin'ny 6 volana eo ny alika kely.
Ny alika rano portiogey dia tsy ho tsara ao amin'ny trano iray raha toa ka ampiasaina tsara. Somary miasa an-trano izy io ary ampy ny tokotany kely. Afaka miaina ivelan'ny trano amin'ny toetrandro mafana izy io, saingy ho sambatra kokoa ny mipetraka akaikin'ny fianakaviany ary mandany andro any an-tokotany.
Ny alika rano portiogey dia alika miasa sy matanjaka miasa amin'ny tanjaka lehibe. Mila fanazaran-tena ara-batana sy ara-tsaina isan'andro izy io, izay misy isan'andro, lava sy lava MANDEHANA na jogging mba hanomezana fahafaham-po ny fiainam-pireneny. Na dia eny am-pandehanana aza ny alika dia tsy maintsy ampidirina amin'ny sisin-tongony na ao ambadik'ilay olona mitazona ny firaka, toy ny ao an-tsain'ny alika ny mpitarika no mitarika ny làlana, ary ny mpitondra dia tokony ho olombelona. Ity karazana ity dia mahomby indrindra amin'ny asa atao. Tian'izy ireo ny milomano ary tsy misy zavatra tian'ny alikao mihoatra noho ny manipy tehina na baolina anaty rano ianao mba hakana azy. Izy io koa dia hankafy romp mahery vaika. Izy ireo dia manao namana tsara amin'ny jogging. Izy ireo dia alika matanjaka be izay mila tompona angovo mahery izay afaka manome azy ireo betsaka tsy ny ara-batana ihany, fa ny fanentanana ara-tsaina, miaraka amin'ny fitarihana matanjaka avy amin'ny mpikambana ao amin'ny fianakaviana. Ireo alika omena an'ity karazana firafitra ity dia mahatonga ny biby fiompy sy alika miasa ary ireo tsy ampy dia ho lasa alika be olana.
Ny alika Rano Portiogey dia tokony hosehina ary hokosehana tsy tapaka. Ny karazana palitao aloha dia tsy mamaritra izay refy ampidirina ao aminy. Safidin'ny tena manokana izany. Sarimihetsika palitao roa no ampiasaina: clip iray misy tarehy sy voaharatra ny volo, ary ilay retriever miasa na clip an'ny biby fiompy izay hety ny alika dia toa iray santimetatra ny halavan'ny palitao manontolo. Ity karazana ity dia saika hypo-allergenic ary tsara ho an'ireo marary allergy. Ny palitao dia milatsaka kely nefa tsy misy volo. Ny palitao dia mitombo miadana kokoa noho ny an'ny a poodle ary tsy mila scissoring na clipping matetika.
Ny alika rano portiogey, araka ny anarany, dia teratany Portugal. Amin'ny tanindrazany dia antsoina hoe Cão de Água, izay midika hoe 'alika rano'. Izy io dia novolavolaina tamin'ny alika miasa ao amin'ny Saikinosy Iberia. Mpilomano tsara, ireo alika dia niasa niaraka tamin'ny mpanjono portogey nandritra ny taona an-jatony nanao asa maro. Tena sarobidy izy ireo ary noheverina ho anisan'ny ekipa. Ny tanjon'ny liona dia nanana tanjona manokana. Ny mpanjono dia nanaratra ny vodiny sy ny vavony mba hanampiana amin'ny lomano sy ny fiasana ao anaty rano. Ny volo lava sisa tavela mba hitazomana ny taova tena ilaina hafanaina sy hiarovana ny alika amin'ny ratra amin'ny vatana, tendany ary loha. Niasa niandry sy nisambotra trondro ireo alika, naka ny harato vaky na izay latsaka tao anaty rano, nitondra hafatra avy amin'ny sambo iray nankany amin'ny sambo iray hafa na avy tany amin'ny sambo nankany amoron-tsiraka ary niambina ireo sambo tany amin'ny seranan-tsambo ivelany aza. Nalaza be ireo alika ireo, eny fa na ny mpanjono tsy mpivarotra aza afaka manofa iray amin'ny diany manjono. Rehefa nandeha ny fotoana dia nanolo ny asan'ny alika ny teknolojia ary tamin'ny 1930 dia nihena be ny isan'ny karazany. Tsy tamin'ny fotoana nanombohan'ny programa Portiogey mpanankarena iray antsoina hoe Vasco Bensaude ny fandaharanasa fitomboana tamin'ny fikasana hamonjy ilay karazany dia nisondrotra indray ny isan'izy ireo. Ny alika voalohany an'ny alika rano Portiogey dia nohafarana tany Etazonia tamin'ny 1958. Tamin'ny 1972 dia natsangana ny Water Dog Club any Portiogaly. Tamin'ny taona 1983 dia neken'ny AKC voalohany ny karazany. Ny talenta sasany an'ny Dog Water Portiogey dia ny fankatoavana, fitsapana rano, hakingana, alika fitsaboana ary alika fanampiana.
Gun Dog, AKC Miasa
Io alika tsara tarehy io dia atao hoe Boomer. Sary natolotry ny Boomer sy Rocky, alika rano roa avy any Portiogaly
Alika kely alika rano portiogey! Sary nahazoana alàlana avy amin'i Jose Fontes Cristalmar / Alika Rano Portiogey, Rio de Janeiro / Brezila
Sary natolotr'i Jose Fontes Cristalmar / Alika Rano Portiogey - Rio de Janeiro / Brezila
dachshund loko sôkôla & fanosotra
Boomer dia mila fihin-tànana!
Ity dia Amalie of Dream Wheel Kennels, saingy antsoina hoe Diddl aorian'ny totozy komikina alemana.
Sary nahazoana alàlana avy amin'i Jose Fontes, Cristalmar / Dog Water Portiogey, Rio de Janeiro / Brezila
'Zoie dia zazavavy portogey Water Water mahafinaritra. Alika antitra izy, 10 taona ankehitriny, saingy azo antoka fa tsy hanao toa azy! Tiany ny mihazakazaka eny amoron-dranomasina, ary ny zavatra tiany indrindra dia ny mihazakazaka eo akaikin'ny bisikiletako . Tia milomano koa izy. Alika tena marani-tsaina i Zoie, mahafantatra fika sy baiko 20 mahery. Teo anilako nandritra ny 10 taona izy, ary tsy afaka nangataka alika tsara kokoa aho. '
Jereo ohatra misimisy kokoa momba ny Alika Rano Portiogey
Sarin'ny alika rano portiogey 1
laboratoara mainty mifangaro lab
amerikana pitbull terrier chihuahua mix
alika kely mpiandry ondry alemanina